Muxuu U Sheegay? Sir Alex Ferguson Oo Booqday Ciyaaryahanadda PSG Ka Hor – Axadle
Tababarihii hore ee Manchester United ee Sir Alex Ferguson ayaa booqasho ugu tegay ciyaartoyda PSG ka hor kulanka caawa ay la ciyaari doonaan Manchester Metropolis.
Sir Alex Ferguson ayaa tegay Lowry Resort oo ku yaalla duleedka Outdated Trafford oo ay deggan yihiin ciyaartoyda PSG, waxaana lagu sawiray isagoo ag-maraya baaska kooxda reer France ay caawa ku tegayaan garoonka Etihad Stadium ee ay ka dhacayso ciyaartu.
Ciyaaryahannada PSG ayaa la dejiyey Lowry Resort oo ay isticmaalaan ciyaaryahannada Manchester United, isla markaana uu sannado badan Sir Alex Ferguson kusii nasan jiray ka hor inta aanu gelin Outdated Trafford.
Wargeyska MEN ee kasoo baxa magaalada Manchester ayaa waxa uu sheegay in gebi ahaan Lowry Resort ay wada kiraysatay PSG oo aanay cidina la wadaagin, sidaas darteedna ciddii timaadda ay kaliya noqonayso shaqsiyaad bathroom ogol yahay in ay ciyaartoyda iyo tababaraha la kulmaan.
Khelaifi oo bathroom magacaabay madaxa Ururka kooxaha Yurub kaddib markii uu fashilmay Tremendous Legue ayaa sidoo kale qayb ka ah safarka kooxda ee magaalada Manchester.